zokubopha ecacileyo, elincanyathiselwe iplastiki ecacileyo, ibhokisi iplastiki ecacileyo, iibhokisi zeplastiki
HLP Klearfold na umvelisi wehlabathi likhulu iibhokisi ngeplastiki ecacileyo , umboneleli ukwalathiswa thermoforming ngokwesiko kunye neetyhubhu zeplastiki ecacileyo zidumbu , kunye umbhekisi phambili ezintsha zokubopha ecacileyo efana Klearfold ® Ndingumgcinikunye Insight ® iinkqubo ukupakisha, kunye Duofold ® udityaniso ukuphakheja. Siqesha ukushicilelwa eziphuhlileyo, ubuciko, kunye nobugcisa njengokuguqula. Wezindlu yethu Soft ndezela ® amanqaku iteknoloji iqinisekisa ukuba Klearfold wethu ® iibhokisi zeplastiki ecacileyo wamisa ngokukhawuleza nangokulula kuzo zombini ngesandla kwaye umatshini-ugcwalise izicelo.
Sizimisele ekunikeni eyona migangatho iphezulu nesevisi yabaxumi, kwaye bakhonza iimfuno ecacileyo ibhokisi zeplastiki yemarike North American iminyaka engaphezu kwe-15. Siye saseka, izibonelelo olusebenzayo kakhulu zithembekile, kwaye abanamava ukuthengiswa kunye neekomiti zolawulo North American. Abasebenzi bethu zokuxhasa kunika ingqalelo iiyure ezingama-24 ukuya kubathengi, kwaye sizame ukunikezela: iikowuteshini ibhokisi ezitywiniweyo kwisithuba seeyure ezingama-24 Iisampulu CAD ngeentsuku ezintathu ukuya kwezintlanu umbala Pheleleyo ibhokisi zeplastiki binne ngaphakathi ngeveki enye zokufumana yomsebenzi Ukuhanjiswa ku North America ngo ezintandathu ukuya iiveki ezisibhozo imvume isampulu ibhokisi zeplastiki
Thina ISO 9001 eqinisekisiweyo kunye Sedex ® ilungu. Sisebenza nzima ukuze bafumane yonke imigangatho yehlabathi yokuthobela zentlalo, sikhuthaza abathengi ukuba atyelele enze umgangatho yabo kunye nophicotho ukuthotyelwa kwezentlalo. Nathi ilungu Amasiko-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), ngokuzithandela inkqubo yokhuseleko supply chain ekhokelwa yi-US Customs and Border Protection, ejolise ekuphuculeni ukhuseleko liphela iinkampani zabucala '.